Notice! တိုင်းရင်းလူမျိုးရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနအသင်း (Centre for Development and Ethnic Studies - CDES) သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၌ တိုင်းရင်းသားရေးရာ သုတေသနအသင်း (Burma Centre for Ethnic Studies – BCES) အဖြစ် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ယခုအခါ CDES အဖြစ် ပြည်တွင်းတွင် တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော BCES ကိုလည်း တရားဝင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ CDES ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းသည့် အချိန်မှစ၍ ဒီမိုကရေစီ နှင့် ဖယ်ဒရယ် လေ့လာရေးစာအုပ်စာတမ်းများ သာမက ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ နှင့် ပက်သက်သည့် စာအုပ်ပေါင်း (၄၀) ကျော်ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး အုပ်ရေ နှစ်သိန်းကျော် ကိုဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။ ထိုစာအုပ်များအနက် ဆလိုင်း လျန်မှုန်း ရေးသားပြုစုသည့် “ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်¬တရားများ” နှင့် “ဖက်ဒရယ်စနစ်၏ အင်္ဂါရပ်များ” ကို ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင်၊ ကရင်နီ၊ မွန် နှင့် ရှမ်း စသည့် တိုင်းရင်းသားစကားများဖြင့် ပြန်ဆို၍ ထုတ်ဝေနေပါသည်။
တိုင်းရင်းလူမျိုးရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သုတေသနအသင်း မှ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်များသည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်များဖြစ်သည်။ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်း ရရှိရေး အတွက် လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် CDES မှ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်များကို စာအုပ်ဆိုင်များတွင် ရောင်းချမည် မဟုတ်ပါ။
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တို့ကို အထောက်အကူပြုသည့် သင်တန်းများ၊ဆွေး နွေးပွဲများနှင့် ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်သည့် လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ နှင့် အဆင့်ဆင့် သော အစိုးရအဖွဲ့များကို အဖွဲ့အစည်းအလိုက် အခမဲ့ ကူညီဖြန့်ချီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တသီးပုဂ္ဂုလ်များကို ပေးနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း သုတေသနကျမ်းပြု စုသောကျောင်းသားများနှင့် သုတေသီများကိုမူ တဦးချင်းလည်း အခမဲ့ ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါး လိုက်ရပါသည်။
Please, point on each cover for more details.
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံမှတ်တမ်း
ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ရာတွင် အခြေခံရမည့် လမ်းညွန်အခြေခံမူများ။
ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကို အခြေခံသော ပြည်ထောင်စုစနစ် တည်ဆောက်ရေး စီမံချက်။
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲတွင်ဆွေးနွေးရန်တင်ပြသော အထောက်အကူပြုစာတမ်းများ။
by Dr.Lian H. Sakhong
by Saw Mra Raza Linn
NCA, JICM, UPDJC, JMC, COC and FPD
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရအကြား ချုပ်ဆိုထားသော တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် နှင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်
by Naung Kyaw
အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အကြောက်တရားမှလွတ်မြောက်ခြင်း အား သမ္မာကျမ်းစာရှုထောင့်မှ ဖတ်ရှုခြင်း
Reading Aung San Suu Kyi's "Freedom from Fear" from Biblical Perspective
by Dr. Van Kung
Peace Process Vol.1
ဒီမိုကရေစီရေး အမျိုးသားတန်းတူရေး နှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရရှိရေး တိုက်ပွဲဝင်မှတ်တန်းများ
UNLD, Struggle for Democracy by Lian H. Sakhong
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် စစ်မှန်သော ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်
Federalism and Ethnic Issues
5th Edited Version.
Genuine General Union
Charectorestics of Federalism
From Homeland until Today
by Naing Ngwe Thein
Union Problems and Arakan Nationalism
by Aye Thar Aung
ကျွန်တော့် အတွေး .. ကျွန်တော့် အရေး .. ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံ
by Sai Nyunt Lwin
The Building ofaGenuine Union
by Naing Han Thar
Ending Ethnic Armed Conflict
by Lian H. Sakhong & Paul Kenaan
ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနှင့် ကျွန်ုပ်၏ တော်လှန်ရေး အတွေ့အကြုံများ
by Thomas Thangnou
ပင်လုံစိတ်ဓာတ်မှသည် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့
by Manko Ban
မွန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်မှု တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ် သမိုင်း
Mon National Struggle and Federalism
အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုနှင့် ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ၏ အခန်းကဏ္ဍတစေ့တစောင်း
Kerenni Revolution and Struggle
by Khu Oo Reh
by Khun Say
My Story on the Struggle for Kachin Freedom
by Shirley Seng